एमाले उदयपुर, क्षेत्र नं. १ मा ८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्बाचित - पूर्णपुष्टि
एमाले उदयपुर, क्षेत्र नं. १ मा ८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्बाचित
बेलाबेला पालिकामा विवादित भइरहने बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापा (स्वस्ती) नेकपा एमाले, उदयपुरको क्षेत्र नं. १ बाट सबैभन्दा बढि मत प्राप्त गरी पार्टीको १० औं महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् ।
आठ जना निर्वाचित मध्ये उनको सबैभन्दा बढि मत १ हजार ८६ आएको हो । दोस्रो मत प्रमेश घिमिरेको रहेको छ । उनले ९२२ मत प्राप्त गरेका छन् । पार्टीका उदयपुर अध्यक्ष इश्वरमणी राउतको तेस्रो मत ७८६ आएको छ । प्रदेश सांसद विमल कार्कीको ७८५, कुशलबाबु बस्नेतको ६५१ र कालु लामाको ६२४ मत आएको छ । लामाले निर्वाचित मध्ये कान्छो मत प्राप्त गरेका हन् ।
समावेशीतर्फ श्रृजना दुनवारको ८०० र महेश्वरी राईको ७२१ मत प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिका लागि खुल्लातर्फ २४ र समावेशी (महिला) तर्फ १० जनाले चुनावमा भाग लिएका थिए । सहमतिय प्रयास विफल भएपछि निर्वाचनबाट नै प्रतिनिधि चयन गर्नु परेको थियो । रातभर मतगणना पश्चात आज विहान मतपरिणाम सार्वजनिक भएको एमाले अध्यक्ष राउतले जानकारी दिए ।
Prevकरेन्ट लागी मृत्यु भएको रानाको परिवारलाई १६ लाख क्षतीपुर्ति
Nextप्रधानन्यायाधीसविरुद्ध उदयपुरमा पनि विरोध प्रदर्शन